Raha ohatra ve ka mbola mpisipa no mampirafy ny anankiray dia fahotana ?
Arakaraky ny finoanao angamba, no azo amaliana izany. Amin’ny ankapobeny mantsy, ny olona vita mariazy any am-piangonana no tena voalaza fa manota,
Latsalatsain’ny vadiko foana aho, satria tsy mety mahazo zaza.
Vokatr’izany dia lasa tia ilay namany aho ary miaraka izahay no sady tena mifankatia be.
Misakafo matsiro fa tsy miha-ngeza…ny atao
Hankalaza ny fetin’ny Asaramanitra isika rahampitso. Hiavaka amin’ny andavan’andro ny sakafo amin’ny ankapobeny. Ahoana ny atao raha toa ka tsy te hiangeza aorian’ny fety? Atoronay anao ny atao :
Lasa nandeha any ambanivohitra ny sipako dia tsy miraharaha ahy mihitsy, nefa izy hitako « connecté » foana.
Akora natoraly hitsaboana “perte”, mety ve?
"Zavatra "naturel" ny ao anaty fivaviana. Raha misy ny fikorontanana ao anatiny dia mety ho vokatry ny fidirana bakteria,
Tsy avelan’ny vadiko mitondra fiara mihitsy aho, fa atahorany hanimba azy.
Izaho anefa mba manana « permis » ihany. Ahoana no fomba andreseko lahatra azy, fa izy dia midrikina be?
Fanadihadiana natao tamin’ny ankizy sy adolantsento miisa 203 706 no nahafantarana fa ny ankizy miara-misakafo amin’ny fianakaviany dia tsara sakafo kokoa no sady tsy ahiana ho lasa diso matavy loatra na ho voan’ny « obésité » kokoa raha mihoatra ireo ankizy tsy miara-misakafo matetika amin’ny fianakaviany.
Fotoana fiaraha-misakafo : sady fianarana koa
Miova isan-dingana ny sakafon’ny ankizy. Raha mandranoka izany rehefa izy vao teraka dia miova mian-dalana mankany amin’ny vetin-kanina izany. Ary hianarany tsikelikely koa ny mampiasa ny fitaovam-pihinanana. Mandritra ny fanatrehana ny fiaraha-misakafon’ny fianakaviana no ahafahany mandray tsara izany haingana. Eo no hahaizany ny fahalalam-pomba sy ny fahadiovana, eo koa no ahafantarany karazan-tsakafo maro izay mety hanintona ny masony, ireo tsiro samihafa, ny fahaizana mizara. Eo koa no hahalalany fa mety tsy mitovy ny zavatra tian’ny olona rehetra. Manokatra azy amin’ny hafa izany.
Entanina hiray latabatra ny tanora
Tsara raha manokana fotoana hiraisana latabatra ny mpianakavy isaky ny afaka mba hikoloana ny fahaizan’ny ankizy misakafo. Tsy tsara ho an’ny fahasalaman’izy ireo ny mihinana maimaika sy ny mihinan-kinam-poana. Rehefa miara-misakafo ihany ny mpianakavy no azo antoka fa sakafo ara-pahasalamana no hohanin’ny ankizy eny fa na dia ny lehibe koa aza.
Mihinan-drery : tsy dia ankafizana sakafo loatra
Ho voasarika hihinana haingana loatra ny olona mihinan-drery raha tsy hoe : efa tena zatra mihitsy. Tsy mety ho an’ny fahasalamana sady mampatavy anefa ny mihinana haingana satria elaela vao tonga any amin’ny ati-doha ny hafatra rehefa voky kanefa efa nahahinana sakafo betsaka. Izany koa anisan’ny mahatsara ny fiaraha-misakafo satria mety mba misy resadresaka ifanaovana mandritra ny sakafo ka tsy ho voasarika hitsako haingana. Apetraka mihitsy aza ny fitaovam-pihinanana isaky ny avy mandrapaka.